Re कारण तपाईंको संगीत वा भिडियो तेस्रो पार्टीमा अपलोड नगर्ने Martech Zone
आइतवार, सेप्टेम्बर 24, 2006 शनिबार, मार्च 31, 2007 Douglas Karr
तपाईं मध्ये कति जना "उपयोग सर्तहरू" पढ्नुहुन्छ? यदि तपाइँ तेस्रो पक्ष मार्फत सामग्री प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ वास्तवमै यसलाई पुन: विचार गर्न सक्नुहुन्छ। संभावना छ कि तिनीहरूसँग पूर्ण, रोयल्टी-मुक्त, तपाईंको सामग्रीलाई प्रबन्धन र वितरण गर्न अधिकार छ, यसको लागि तपाईंलाई सँधै क्षतिपूर्ति बिना नै। यदि तपाईं भिडियो, mp3, पोडकास्ट, आदि काटने को समस्या को माध्यम बाट जाँदै हुनुहुन्छ भने। पैसा खर्च गर्नुहोस् र यसलाई आफैं होस्ट गर्नुहोस्। त्यस तरीकाले तपाईं यी मध्ये कुनै विचित्र प्रयोगका सर्तहरूसँग सहमत हुन आवश्यक छैन जसले केही विशाल कम्पनीलाई तपाईंको सामग्रीको अधिक पैसा पनि बनाउँदछ।
यदि तपाइँ यूट्यूबमा एक भिडियो अपलोड र यूट्यूब एक लाख हिट यसको बन्द हुन्छ ... तपाईं आफ्नो जेब मा पैसा राख्नु भयो! तपाईं किन त्यसो गर्नुहुन्छ?
यूट्यूब - तपाईले यूट्यूबलाई युट्युब वेबसाइट र युट्युबको सम्बन्धमा प्रयोगकर्ता सबमिशनहरू प्रदर्शन गर्न, प्रदर्शन गर्न, र व्युत्पन्न कार्यहरू तयार गर्न, पुन: उत्पादन गर्न, वितरण गर्न, प्रदर्शन गर्न, र प्रदर्शन गर्नको लागि विश्वव्यापी, गैर-अनन्य, रोयल्टी-रहित, sublicenseable र हस्तान्तरण योग्य इजाजतपत्र प्रदान गर्नुहोस्। यसको उत्तराधिकारीको) व्यापार, प्रचार गर्न वा पुनः वितरण वितरणको लागि सीमित बिना वा सबै युट्युब वेबसाइट (र यसका व्युत्पन्न कामहरू) कुनै पनि मिडिया ढाँचामा र कुनै पनि मिडिया च्यानलहरू मार्फत।
गुगल - तपाई गुगललाई निर्देशित र आधिकारिक गर्दै हुनुहुन्छ, र गुगललाई रोयल्टी-फ्री, गैर-विशेष अधिकार र इजाजत पत्र, होस्ट, क्याच, मार्ग, प्रसारण, भण्डार, प्रतिलिपि, परिमार्जन, वितरण, प्रदर्शन, प्रदर्शन, पुन: स्वरूप, अंश, (ii) गुगलको सर्भरमा आधिकारिक सामग्री होस्ट गर्न (ii) आधिकारिक सामग्रीको सूचका order्कका लागि आधिकारिक सामग्रीको आधारमा एल्गोरिदमहरू बनाउने, विश्लेषण गर्ने र बनाउने भाँडामा सुविधा पुर्‍याउनुहोस्; (iii) प्रदर्शन, प्रदर्शन र आधिकारिक सामग्री वितरण
माईस्पेस - प्रदर्शन वा प्रकाशित (“पोष्टिंग”) कुनै पनि सामग्रीलाई माइस्पेस सेवाहरूमा वा मार्फत, तपाईं यसैले MySpace.com लाई प्रयोग गर्न, परिमार्जन गर्न, सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न, सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन, पुन: उत्पादन, र वितरण गर्न सीमित लाइसेन्स प्रदान गर्नुभयो केवल त्यस्ता सामग्रीमा र वितरण गर्न। MySpace Services को माध्यम बाट।
FLURL - तपाईं यहाँ सेवा, वेब साइट, र / वा सेवा संग कुनै पनि तरिकाले प्रयोग, सबै तरिका प्रकाशित गर्न, मार्केट, बेच्न, इजाजतपत्र, शोषण, र कुनै पनि तरिकामा प्रयोग गर्न गैर-विशेष अनुमतिपत्र दिनुहुन्छ। संगीत, फोटो, साहित्यिक सामग्री, कला, नाम, शीर्षक र लोगो, ट्रेडमार्क, र अन्य बौद्धिक सम्पत्ती सहित तर सीमित। तपाईंलाई अपलोडहरू वा सेवामा अन्य सामग्री प्रदान गरीएको क्षतिपूर्ति दिइने छैन।
DropShots - DropShots हो, अन्यथा नभएसम्म, सेवा र यसका सामग्रीहरूमा सबै प्रतिलिपि अधिकार र डाटाबेस अधिकारहरूको मालिक। हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार सूचनामा सेट गरिएको सीमित प्रयोग इजाजतपत्र बाहेक तपाइँ कुनै सामग्री फाराममा फोटोकपी वा कुनै पनि माध्यममा भण्डारण सहित) कुनै पनि सामग्रीको रूपमा प्रकाशित गर्न, वितरण गर्न, निकाल्न, पुनः प्रयोग वा पुन: उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न।
तपाइँको सामग्री नि: शुल्क दिन बन्द गर्नुहोस्! ठूला कम्पनीहरूले तपाइँको सामग्रीलाई वेबसाइट मार्फत वितरण बाहिर प्रयोग गर्नका लागि कहिले पनि प्रतिबद्धता जनाउँदैनन्। ठूला कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ यदि तिनीहरूले तपाईंको सामग्रीलाई साइटको बाहिर प्रयोग गर्छन्। र ठूला कम्पनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो सामग्री OWN जारी राख्न दिनेछ - तपाईं तिनीहरूको सेवा छोडे पछि पनि।
प्रयोगका सर्तहरू पढ्नुहोस्!
विशेषज्ञता नि: शुल्क छ, श्रोतहरू छैनन् ...
सेप्टेम्बर 24, 2006 बेलुका 9:58 बजे
राम्रो पोस्ट। Revver.com मा तपाईं के सोच्दै हुनुहुन्छ, जसले तपाईंको सामग्रीबाट तपाईंलाई कमाएको पैसा विभाजन गर्दछ?
सेप्टेम्बर 24, 2006 बेलुका 10:16 बजे
म हाल तिनीहरूको साइटमा 500 लिपि त्रुटि प्राप्त गर्दैछु...
तिनीहरू ब्याकअप हुँदा म प्रयोगका सर्तहरू जाँच गर्नेछु। म एक वकिल होइन - केवल यी सामग्री एग्रीगेटरहरूको बारेमा कुरा गर्ने धेरै लेखहरू र छलफलहरू हेरेको छु जसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई सामग्रीको 'स्वामित्व' को बारेमा गलत जानकारी दिन्छ, यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, र सामग्री प्रदायकलाई कहिल्यै क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ वा छैन। प्रयोग।
सेप्टेम्बर 25, 2006 बेलुका 2:23 बजे
धेरै राम्रो पोस्ट, डग।
विशेष गरी ध्यानमा राख्दै कि धनी मिडिया होस्टिंगले पनि अब हात खर्च गर्दैन र एक खुट्टा ... (यहाँ म सिफारिस गर्न सक्छु मिडिया टेम्पल जसमा मैले लगभग5वर्षको लागि मेरो मूल सर्भर आपूर्तिकर्ताप्रति वफादार भइसकेपछि स्विच गरें। तिनीहरूसँग धेरै उच्च ग्राहक सन्तुष्टि छ, र तिनीहरूले गैर-गीकी ग्राहक इ-मेलहरूलाई जवाफ दिने गतिमा म छक्क परें। (र होइन, म तिनीहरूद्वारा कार्यरत छैन ...)
तेस्रो पक्षमा तपाइँको स्वामित्वको सामग्री होस्ट नगर्नुको अर्को कारण हो, तपाइँलाई थाहा छैन कि उनीहरूले भविष्यमा कसरी उनीहरूको नीतिहरू परिवर्तन गर्छन् - राम्रो, वा तपाइँलाई तपाइँले तपाइँको कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ थाहा छैन ... (कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ एक राम्रो भिडियो/गीत बनाउनुहुन्छ जुन तपाइँ राख्नुहुन्छ। अनलाइन, र केहि मार्केटिङ संस्थाले यसलाई तपाइँबाट किन्न चाहन्छ - तपाइँ वास्तवमा यसलाई बेच्न सक्नुहुन्न जब तपाइँ डगले राखेका सर्तहरूमा सहमत हुनुभयो ...)
त्यसैले: आफैलाई होस्ट गर्नुहोस्। खुसी हुनुहोस्। सृजनात्मक बन।
र प्लगको रूपमा, यहाँ मैले खिचेका केही भिडियोहरू छन्।
मार्स 24, 2007 मा 11: 03 एएम
म तपाईको लेखमा द्रुत टिप्पणी गर्न चाहान्छु। कलाकारहरूलाई उनीहरूको मिडिया तेस्रो पक्ष होस्ट/वितरकमा पेश गर्ने विचार गर्न प्रोत्साहित गरेकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। वास्तवमा, धेरै रचनात्मक व्यक्तिहरू मनोरञ्जन उद्योग र बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापार र कानुनी पक्षहरूलाई विचार गर्न असफल हुन्छन्, र यो अवसरवादी मानिसहरूका लागि सजिलो हुन सक्छ - तिनीहरू प्रबन्धकहरू, एजेन्टहरू, रेकर्ड लेबलहरू (ठूलो वा साना), वा वेबसाइट अपरेटरहरू - को लागी। व्यवसायिक कौशलता वा अमेरिकी प्रतिलिपि अधिकार कानूनको आधारभूत बुझाइ नभएकाहरूको फाइदा लिनुहोस्।
यसो भनिएपछि, तेस्रो-पक्ष प्रकाशकहरू र वितरकहरूसँग प्रतिलिपि अधिकार मालिकहरूले तेस्रो-पक्षलाई प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने बाहेक कुनै विकल्प बाँकी छैन। गैर-विशेष प्रतिलिपि अधिकार धारक (कलाकार) को निश्चित अधिकारहरूको लागि इजाजतपत्र, inter aliaप्रतिलिपि अधिकार भएको सामग्रीलाई पुन: उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार। अन्यथा, तेस्रो-पक्ष प्रकाशक प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनको लागि दायित्वको अधीनमा छ। यही कारणले गर्दा माथि उल्लिखित सर्तहरू प्रयोग सम्झौताहरूमा भाषा धेरै समान छ (र हाम्रो वेबसाइट निश्चित रूपमा कुनै अपवाद छैन)।
यदि तेस्रो-पक्ष प्रकाशकले खोज्छ भने अनन्य इजाजतपत्र, त्यसपछि त्यो शंकास्पद छ, र त्यो सेवा सम्भवतः बेवास्ता गर्नुपर्छ, परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ।
रेडियो LLC को आत्मा
अप्रिल 23, 2007 मा 4: 05 PM
कसरी एकले आफ्नै भिडियो वा पोडकास्ट होस्ट गर्छ? मसँग मेरो वेबसाइटमा भिडियो छ तर म जनतालाई कसरी हेर्न सक्छु?
अप्रिल 26, 2007 मा 2: 07 PM
कृपया हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाई कुन महान कम्पनीहरू आफ्नो पोस्टको अन्त्यमा बोल्नुहुन्छ! तिमिले मलाई झुन्ड्याएर छोड्यौ ! म मेरो संगीतमा सबै अधिकारहरू कायम राख्न चाहन्छु, तर पनि म श्रोताहरू बस्ने सरल तथ्यको लागि केही माध्यमहरू प्रयोग गर्न बाध्य छु।
मलाई लाग्छ कि सामाजिक वास्तुकला साइटहरू, वास्तविक साइटहरू, जस्तै tribe.net कलाकार नियन्त्रित मिडिया फैलाउनको लागि परिपक्व आधारहरू हुन्। यस समयमा त्यो विशेष एक संगीत होस्टिंग क्षमताहरू बिना छ, यद्यपि यसले YouTube जस्ता सामग्री साइटहरूमा इम्बेडेड लिङ्कहरूलाई अनुमति दिन्छ। मसँग एक MySpace खाता छ जुन SnowCap सँग लिङ्क गरिएको छ, जहाँ म गीतको मूल्य सेट गर्न सक्छु, जुन तिनीहरूले मार्कअप गर्छन्। म यससँग मात्र खेलिरहेको छु र थप एक्सपोजर चाहिन्छ, त्यसैले मैले मेरो काम अन्यत्र होस्ट गर्ने विचार गर्नुपर्छ। ठूला साइटहरू संतृप्तिको कगारमा देखिन्छन् र ध्वनिमा मात्र भिडियोमा पूर्ण रूपमा ढल्केका छन्।
अप्रिल 26, 2007 मा 5: 13 PM
सबै प्रमुख कम्पनीहरूले तिनीहरूको प्रयोगका सर्तहरू परिमार्जन गर्दै आएका छन् र निरन्तर रूपमा त्यसो गर्न जारी राख्छन्। यसलाई निरन्तर समीक्षा आवश्यक हुनेछ। म केवल मानिसहरूलाई चेतावनी दिन्छु कि उनीहरूले आफूले आफूलाई लाग्ने कुनै पनि कुरा अपलोड गर्नु अघि प्रयोगका सबै सर्तहरू समीक्षा गर्नुपर्छ। म कसैलाई आफ्नो संगीत वा भिडियोको अधिकार सर्भरमा अपलोड गरेर गुमाएको देख्दा घृणा गर्छु... जहाँ अरू कसैले यसलाई कमाउन सक्छ!
अगस्ट 22, 2008 मा 5: 53 AM
यहाँ एक मान्य वैकल्पिक Kiqlo छ
Kiqlo तपाईंको सामग्रीमा अधिकार प्राप्त गर्न इच्छुक छैन। किक्लोले तपाइँलाई तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार राख्दा तपाइँको सामग्री बेच्न अनुमति दिन्छ। तपाइँ यसलाई सित्तैमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सित्तैमा बेच्न सक्नुहुन्छ र Kiqlo ले कुनै पनि कटौती गर्दैन। यो सत्य हो! कुनै पकड छैन!
तपाईं लगइन बिना डाउनलोड, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ बेच्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँलाई लग इन गर्न आवश्यक छ। यो एक नयाँ अवधारणा हो तर यो यस उद्देश्यको लागि हो।
अक्टोबर 21, 2008 बिहान 2:25 बजे
कृपया हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाइँ Ourstage.com को बारेमा के सोच्नुहुन्छ। मेरी श्रीमती र म दुबै गीतकार हौं र हामीले उनीहरूको साइटमा धेरै गीतहरू राखेका छौं। सुरुका केही दिन हामी शीर्ष १० मा राखिएका थियौं र हाम्रो क्षेत्रका केही पनि नम्बर एकमा पुगेका थिए र 10 देखि4दिन पछि, हाम्रा सबै गीतहरू रेटिङको तल वा बीचमा झर्छन् र हाम्रा गीतहरूको भोटिङ हुँदैन। हामी मध्ये एक को अर्थ को चाट्नुहोस् ?? तिनीहरू दावी गर्छन् कि सबै अधिकार हाम्रो रहन्छ र सबै बिक्री हाम्रो paypal खातामा जानेछ तर अहिलेसम्म हामीले हाम्रा पोस्ट गरिएका गीतहरूबाट एक पैसा पनि कम गरेका छैनौं। के हामीलाई सवारीको लागि लगिएको छ? मैले अधिकांश सम्झौता पढेको छु तर सबै होइन। म ass-u-med सबै कुरा माथि र माथि थियो तर तपाईंका पाँच कारणहरू पढेपछि म निश्चित छैन?
तपाईको ब्लगको लागि धन्यवाद। तपाईको दिन शुभ रहोस् र तपाईले दिनहुँको आधारमा तपाईको जीवन र प्रेमको आशिष् महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
उहाँको धन्य नाममा,
अर्कोतर्फ आफ्नो संगीत कहीं पनि अपलोड नगर्नुहोस् र आफ्नो बाँकी जीवनको लागि गुमनाम हुनुहोस्!
हो, सँधै नियम र सर्तहरू पढ्नुहोस् (तपाईले धेरै विश्वास गर्नुहुन्न) र धेरै जसो समय यी दुरुपयोग हुनेछैन।
मलाई लाग्छ कि यो थोरै पाउनको लागि थोरै दिनुको कुरा हो, तपाईं आफैलाई खुलासा नगरीकन एक्सपोजरको आशा गर्न सक्नुहुन्न (अभिव्यक्ति माफ गर्नुहोस्) म एक संगीतकार हुँ जसले टिभी/फिल्मका लागि लेख्छु, म यसबाट राम्रो जीवन बिताउने प्रबन्ध गर्छु र म चाहन्न। यदि मैले मानिसहरूलाई विश्वास नगरेको भए तिनीहरूमाथिको विश्वासको दुरुपयोग नगर्ने हो भने मैले मेरो संगीत सुम्पेर राखेको छु। (र मैले अझै पनि यो सबै समय गर्नुपर्छ, अन्यथा काम सुक्नेछ)
मेरो संगीतको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग पछि आएको छ जब मेरो संगीत टिभीमा प्रसारित भएको थियो र त्यसपछि आधिकारिक रूपमा iTunes आदिमा बिक्रीको लागि गएको थियो, कसैले यसलाई किन्न निर्णय गर्यो र यसलाई टिभी शोको फ्यानसाइटमा राख्यो, नि: शुल्क डाउनलोडको लागि।
मेरो संगीत बज्दा म youtube बाट भुक्तानी पाउँछु किनभने यो काम गर्ने वास्तविक तरिका हो, लेखले भनेजस्तो होइन (म यो सुनिश्चित गर्ने सङ्कलन समाजको सदस्य हुँ) PRS
त्यसैले कृपया यस लेखबाट टाढिनु हुँदैन।
डिसे 4, 2009 मा 12: 27 AM
के तपाई सोच्नुहुन्छ कि केहि भिडियोहरू हेर्नको लागि मानिसहरू इन्टरनेटको पछाडिको भागमा तपाईको साइटमा आउनेछन्? मानिसहरू युट्युब र अन्य साइटहरूमा जान्छन् किनभने तिनीहरू लोकप्रिय छन् र मानिसहरूले उनीहरूको सामग्री हेर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। म भन्न चाहन्छु कि अपलोडर जनसंख्याको राम्रो 80%+ ले वास्ता गर्दैन कि उनीहरूले यसलाई प्रयोग गर्छन् वा गर्दैनन्, मलाई थाहा छ मलाई थाहा छैन। पक्का तिनीहरूले आफ्नो साइटमा नि: शुल्क हिटहरू पाउँछन्, तर त्यो तिनीहरूको व्यवसाय हो। यदि तिनीहरूले हिटहरू प्राप्त गरेनन् भने तपाईंले तिनीहरूलाई अपलोड गर्नुहुने छैन। यदि तपाइँ धेरै भिडियोहरू र/वा तस्विरहरू उत्पादन गर्ने एक प्रसिद्ध, लोकप्रिय समूह हुनुहुन्छ भने साइट किन्नु र तपाइँको सामग्रीमा प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त गर्ने एक मात्र तरिका हो। अन्यथा तपाईं आफ्नो आफ्नै सीङ टाँस्दै हुनुहुन्छ र महत्त्वपूर्ण हुन खोज्दै हुनुहुन्छ।